Finday avo lenta CAT S31 sy S41 vaovao, finday henjana indrindra amin'ny fangatahana mpampiasa | Vaovao momba ny gadget
Karim Hmeidan | | Finday, Presentations
Rehefa manapa-kevitra isika mividy smartphone na iray hafa, matetika isika dia mihevitra ny fanoherana izany. Mazava ho azy fa ny fandoavana ny vidiny napetrak'ireo mpanamboatra tato ho ato dia mahatonga antsika hatahotra ny mety hisian'ny lozam-pifamoivoizana izay mety hiteraka fahasimbana amin'ny farany ary tsy misy antoka azo antoka.
Noho ireo olana ireo dia misy ny tsenan'ny fitaovana voasokajy ho mahatohitra, fanoherana ny fitsapana ny zavatra rehetra hahatonga azy ireo hahatohitra ny lozam-pifamoivoizana mety hitranga. Androany izahay mitondra anao ny sasany amin'ireo smartphone maharitra indrindra, CAT izay mahita ny fanavaozana ny fitaovany mba hahafahan'ny olona mitaky ny hanome fahafaham-po ny fanirian'izy ireo hividy zavatra mahasoa sy mahatohitra. Aorian'ny fitsambikinana dia omena anao ny antsipirian'ny vaovao CAT S31 sy CAT S41, iray amin'ireo fitaovana mahatohitra mafy indrindra eny an-tsena eo ambanin'ny antoka CAT, ny mitarika mpanamboatra fitaovana fananganana matihanina sy fitaovana indostrialy.
Araka ny efa hitanao, manatrika izahay finday manokana tena manokanaRaha ny fahitako azy dia tsy finday finday ho an'ny mpampiasa "normal" izy ireo, takatry ny mahazatra toy ny mpampiasa izay tsy amin'ny toe-javatra tsy ampoizina ahafahan'ny finday avo lenta atahorana. Azonao jerena amin'ny horonantsary teo aloha, tsy misy finday avo lenta CAT amin'ny latabatra ao amin'ny trano fisakafoanana, na amin'ny fiara ao anaty metro (na dia tsy maintsy lazaina aza fa mety hampidi-doza io), CAT dia any an-tsaha, any an-tendrombohitra, any anaty asa….
1 CAT S41, ny afovoany mahatohitra
2 CAT S31, mora vidy miaraka amin'ny toetra mitovy aminy
3 Hividy ny CAT S31 na S41 ve aho?
CAT S41, ny afovoany mahatohitra
Ny fifantohana amin'ireo maodely roa natolotra dia tokony holazaina fa tsy manisy fiheverana ny CAT S60 natolotra volana vitsivitsy lasa izay (ilay maodely malaza misy fakan-tsary mafana), ity S41 ity dia tonga hanolo ny S40 taloha ary noho izany dia mitana ny elanelan'ny finday avo lenta avy amin'ny orinasa: ny S60 no avo-farany, ny S41 ny afovoany, ary ny S31 ny ambany. CAT S41 miaraka amin'ny IP68 fanamarinana, ny mpampitohy azy rehetra dia tantera-drano ary na dia arovan'ny plastika plastika aza ny zava-drehetra, izany dia mba hisorohana ny ranoka sarotra esorina tsy hipetraka ao anatin'ny fitaovana.
Smartphone iray somary matanjaka miaraka amina processeur MTK P20 MT6757 2,3 GHz octa-core, RAM 3 GB ary tahiry anatiny 32 GB. Ny ati-doha izay tohanan'ny Android Nougat ary araka ny nolazain'izy ireo taminay dia manantena izy ireo fa afaka manohy manavao tsy misy olana amin'ireo kinova manaraka amin'ny rafitra fiasa Android. Sarin'ny 5 santimetatra miaraka amin'ny Gorilla Glass 5, ary arakaraka izay nolazain'izy ireo taminay dia andrana amin'ny fianjerana 1.8 metatra amin'ny beton io. Tokony holazaina fa eny, finday avo lenta tena mahatohitra (mahatohitra fianjerana, mahatohitra rano, mahatohitra tsiranoka ...) fa hoy aho hoe raha te hanaparitaka azy ianao dia hanaparitaka azy, izany hoe, mahatohitra ny lozam-pifamoivoizana isan'andro, mazava ho azy amin'ny maha-izy azy namboarina tamin'ny plastika dia ho mahatohitra kokoa noho ny iPhone misy fonony fitaratra.
Tsy misy isalasalana, ny iray amin'ireo zavatra mahaliana amin'ity CAT S41 ity dia ny fahafaha-mampiasa ny Bateria 5000 mAh hahafahana mameno fitaovana hafa (miaraka amin'ny fahafaha-mampiasa fiampangana haingana amin'ny alàlan'ny fametrahana ny S41 amin'ny fomba fatoriana), izany hoe, ampiasao ny CAT S41 ho toy ny powerbank amin'ny fitaovana hafa, zavatra ilaina fa raha ny fahitako azy tsy dia ilaina loatra (mendrika ny fihenam-bidy), heveriko fa amin'ny farany dia mamatotra ny tenantsika amin'ny tariby amin'ny fitaovana hafa hampihenana azy io fa tsy mamokatra.
CAT S31, mora vidy miaraka amin'ny toetra mitovy aminy
Ny fanovana ny maodely dia mifantoka amin'ny CAT S31 isika, finday avo lenta iray izay hanasokajianay azy amin'ny faritra ambany CAT, eny, manana toetra mitovy amin'ny zokiny CAT S41 amin'ny vidiny ambany izy io. Ity CAT S31 ity dia misy fampiratiana 4,7 santimetatra arovan'ny Gorilla Glass 3 na dia lazain'izy ireo amintsika aza fa io dia voasedra koa amin'ny fianjerana mihoatra ny iray metatra sy sasany metatra (manana fanamarinana fanoherana mitovy amin'ny S41). Izy ireo dia nametraka fitaovana fanodinana Qualcomm Snapdragon de quad core amin'ny 1,3 GHz, miaraka amin'ny RAM 2 GB sy 16 GB fitehirizana anatiny. Eny, endri-javatra ratsy kokoa saingy amin'ny farany ianao dia hampiasa ity fitaovana ity amin'ny zavatra hampiasanao azy, amin'ny toe-javatra mampidi-doza, noho izany dia tsapako kokoa raha mitady finday avo lenta ianao.
Hividy ny CAT S31 na S41 ve aho?
Ho an'ny fanontaniana volamena momba ny hividy na tsia ny CAT S31 na S41 vaovao, ny valiko dia miankina izany, miankina amin'ny zavatra maro izany. Miatrika fitaovana izay tsy dia lafo loatra isika (384 euro ho an'ny CAT S41 ary 329 euro ho an'ny CAT S31), zavatra mety hahatonga azy ireo ho matsiro mazava ho azy, saingy tsy maintsy manao izany koa isika diniho ny toe-javatra misy antsika tsirairay avy. Heveriko fa fitaovana tsara ho an'ny olona rehetra afaka mampiasa azy ireo amin'ny asany, asa izay, araka ny nolazainay, dia mitera-doza amin'ny fitaovantsika, marika CAT ny marika ary hanana fitaovana maharitra ianao.
ny CAT S31 sy S41 dia sasany amin'ireo fitaovana henjana indrindra eny an-tsena (tsy mieritreritra ny handalo kamio ho azy ireo) ary safidy tsara izy ireo raha mieritreritra fitaovana mahatohitra ianao, raha tsy izany dia hividy fitaovana hafa be mpividy indrindra ianao. Amazon sy MediaMarkt no mpaninjara ofisialy ary ho tonga eto amin'ny firenentsika izy ireo amin'ny volana ho avy, ka fantatrao, tombano ireo toetra sy filàna ilaina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Finday avo lenta CAT S31 sy S41 vaovao, finday henjana indrindra ho an'ireo mpampiasa mitaky
Tonga ny iOS 2 beta 11.1 feno emoji vaovao mahafinaritra